Ababukeli bezithombe abangu-10 abahamba phambili ukufaka isicelo seWindows, i-Emulator.online ▷ 🥇
Isibukeli sesithombe somdabu seWindows 10 asithandwa kakhulu ngabasebenzisi bohlelo. Ngokuyinhloko, ngenxa yokwehlisa ukuvula izithombe nokuhambisana namafomethi ambalwa. Futhi, imisebenzi yokuhlela etholakalayo ivinjelwe.
Uma ufuna ezinye izindlela zalolu hlelo, sibhale ababukeli bezithombe eziyi-10 abaphezulu abangazilanda ku-Windows PC yakho. Hlola!
1. Isibukeli Sezithombe Esisheshayo
Ilula futhi kulula ukuyisebenzisa, i-FastStone Image Viewer ikuvumela ukuthi ubuke izithombe kusikrini esigcwele, usondeze futhi ubuke idatha ye-EXIF. Ukuzulazula kwefolda kungenziwa ngemenyu ephezulu. Amathuluzi atholakala kubha engezansi kwesikrini.
Iyahambisana nezandiso eziningi, futhi inikezela ngemisebenzi yokuhlela. Lokhu kufaka phakathi ukunqampuna, ukukhulisa usayizi, ukususwa kwamehlo abomvu nokulungiswa kokukhanyisa. Kungenzeka futhi ukuthi wenze ama-slide shows, ufake imibhalo nezitika ezithombeni, phakathi kwezinye izinketho.
Isibukeli Sezithombe Esisheshayo (mahhala): Windows 10, 8, 7, Vista ne-XP.
I-Winaero inemisebenzi eminingi ngokoqobo yokwenza izilungiselelo nezici zeWindows. Phakathi kwabo, kukhona inketho yokuletha isibukeli sesithombe sohlelo lwakudala Windows 10.
Ukuze wenze lokhu, vula uhlelo bese useshe Izithombe ebhokisini lokusesha. chofoza ku Thola izinhlelo zokusebenza zakudala / Yenza kusebenze iWindows Photo Bhekar. Bese uye ku- Yenza kusebenze iWindows Photo Bhekar.
Uzoyiswa kuzilungiselelo ezizenzakalelayo zohlelo lokusebenza. Chofoza uhlelo lokusebenza oluchazwe ku-Photo Viewer, nakuhlu oluvelayo, iya ku- I-Windows Photo Viewer. Yebo, kuzoba lapho kuzinketho, njengezinsuku zakudala.
Winaero Tweaker (mahhala): Windows 10, 8 no-7
Olunye lwezinhlelo zesikhombimsebenzisi esihle kakhulu kuhlu lwethu. I-ImageGlass inikeza izinsiza kulabo abafuna isibukeli esihle sesithombe, ngaphandle kokungeziwe. Uhlelo lokusebenza likuvumela ukuthi ujikeleze isithombe ngokuvundlile nangokuqondile, futhi ulungise ububanzi, ukuphakama noma ungene kusikrini sonke.
Ungaphinda uxhumanise izandiso kubahleli bezithombe ezithile, isibonelo, vele uvule i-PNG ku-Photoshop. Ungakhetha futhi ukuthi ubonise ibha yamathuluzi, iphaneli lesithonjana, kanye nengemuva elimnyama noma elihluziwe.
Uhlelo luxhasa amafayela ngamafomethi angaphezu kwama-70, njenge-JPG, GIF, SVG, HEIC, ne-RAW.
ImageGlass (mahhala): Windows 10, 8.1, 8, SP1, 7
Ukukhanya, okusheshayo nokusebenza kwamagama angachaza i-JPEGView. Uhlelo lokusebenza luqhakambisa isithombe, ngebha yamathuluzi enezithonjana ezincane nezisobala. Kuboniswa kuphela lapho igundane libekwe ngaphezulu kwesikrini. Imininingwane emayelana nesithombe, kufaka phakathi i-histogram, ingabukwa ngokuchofoza uhlamvu i.
Uma uhambisa isikhombi phansi, ezinye izinketho zokuhlela ezithakazelisayo ziyaboniswa. Phakathi kwabo, ithuluzi lokulungisa ukungafani, ukukhanya nokugcwala, ukushintsha kwezinguquko nokufiphaza. Ixhasa amafomethi we-JPEG, BMP, PNG, WEBP, TGA, GIF ne-TIF.
Ukubukwa kwe-JPEG (mahhala): Windows 10, 8, 7, Vista ne-XP
5. Isibukeli sezithombe eziyi-123
123 Photo Viewer ivelela ukusekelwa kwayo kwamafomethi okunzima ukuwathola kwezinye izibukeli zezithombe zeWindows, njengeLIVP, BPG nePSD. Uhlelo lokusebenza likuvumela ukuthi usondeze ngokuchofoza okukodwa futhi unezinqamuleli zekhibhodi ukuze uzisebenzise kalula.
Ngaphezu kwalokho, inemisebenzi ehlukahlukene yokuhlela, njengokuhlunga, ukuhlangana kwesithombe, nokufakwa kombhalo. Uhlelo futhi lusekela izandiso ze-animation, njenge-GIF, i-APNG, ne-WebP. Okuwukuphela kwento embi ukubhekana nesikhangiso senguqulo ekhokhelwe esikrinini sasekhaya.
123 Isibukeli Sezithombe (mahhala): Windows 10 no-8.1
I-IrfanView isibukeli esingasindi, esisebenziseka kalula esinezinkinobho okulula ukufinyelela kuzona zokuphrinta, ukunqampuna ingxenye yesithombe, nokubuka imininingwane ye-EXIF. Uhlelo lunomsebenzi wokuguqula ifomethi, njengokusuka ku-PNG kuye ku-JPEG kalula.
Ungafaka futhi i-watermark, ungeze imingcele, futhi wenze ukulungisa umbala. Noma kunjalo maqondana nokuhlela, umsebenzisi angakwazi ukukhulisa usayizi futhi azungezise ifayela, afake izihlungi nemiphumela, aze aguqule nombala owodwa.
Uhlelo lokusebenza kungenzeka lungabi enembile kulabo abangenalo ulwazi lokuhlela. Futhi, ukuze uyisebenzise ngesiPutukezi, udinga ukulanda futhi ufake ipakethe yolimi etholakala kuwebhusayithi yonjiniyela. Kepha inqubo iyashesha.
I-IrfanView (mahhala): Windows 10, 8, 7, Vista ne-XP
IrfanView ulimi pack
I-XnView ingenye inketho yesibukeli sesithombe eza nezici eziningi ezengeziwe. Yize kungeyona enye yezinketho zobungani maqondana nokusebenziseka, iyahambisana namafomethi angaphezu kwama-500 futhi ivumela isenzo se-batch. Phakathi kwabo, qamba kabusha bese uguqula amafayela amaningi ngasikhathi sinye.
Futhi ungakhulisa usayizi futhi utshale izithombe, udwebe kuzo, futhi ulungise iso elibomvu. Kukhona futhi ithuba lokulungisa izici ezinjengokukhanya, ukungafani, ukugcwaliswa, izithunzi, phakathi kwabanye.
XnView (mahhala): Windows 10 no-7
Ilula futhi kulula ukuyisebenzisa, iHoneyView iqokomisa izici eziyisisekelo ezilindelwe kumbukeli wesithombe. Okusho ukuthi, sondeza ngaphakathi nangaphandle, ujikeleze isithombe bese uya kokulandelayo noma ubuyele kokwedlule.
Imininingwane ye-EXIF ingafinyelelwa ngokushesha ngenkinobho phezulu ngakwesokunxele kwesikrini. Ngaphandle kokuguqulwa kwesakhiwo se-batch image, lolu hlelo lukuvumela ukuthi ubuke amafayela acindezelwe ngaphandle kokuwacindezela.
I-honeyView (mahhala): Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista ne-XP.
I-Nomacs inokubukeka okukhumbuza umbukeli wesithombe se-Windows wakudala. Ngakho-ke, noma ngubani othanda uhlelo lweMicrosoft akufanele abe nobunzima bokusebenzisa lolu hlelo. Ngokuqondene nesibonisi uqobo, sikuvumela ukuthi ushintshe kalula imodi phakathi kwesikrini esigcwele, i-100% noma eyokuqala.
Kungenzeka futhi ukuthi ujikeleze, ushintshe usayizi futhi utshale isithombe usebenzisa izinkinobho ezigqanyisiwe. Isoftware inikezela ngamathuluzi wokuhlela ahlukahlukene njengokulungiswa kwe-saturation, ukudala isithonjana se-PC, nokuningi.
abaqokiwe (mahhala): Windows 10, 8, 7, Vista, XP no-2000
Isibukeli esiku-inthanethi kuphela kuhlu lwethu, Izithombe ze-Google kungaba ukukhetha kwalabo abathanda ukugcina wonke amafayela ndawonye endaweni eyodwa. Uhlelo lokusebenza lweselula likuvumela ukuthi wenze isipele ngokuzenzakalela izithombe futhi uzifinyelele kusuka kusiphequluli.
Uma ufuna, ungaphinda ulayishe izithombe ezigcinwe kwi-PC naku-Google Drayivu kunguqulo yewebhu yohlelo. Isevisi inokusesha izihloko nezindawo namathuluzi wokuhlela alula. Ibuye ibe nemihlangano ezenzakalelayo kanye nezikhumbuzo ezivela ngosuku olufanayo eminyakeni eyedlule.
Okungahle kube yinkinga kwabanye yisidingo sokuxhumeka kwe-inthanethi ukusisebenzisa.
Izithombe zeGoogle (mahhala): Iwebhu
Setha isibukeli esisha sesithombe njengokuzenzakalelayo
IWindows ichaza uhlelo lohlelo lwendabuko njengombukeli ozenzakalelayo. Okusho ukuthi, izosetshenziselwa ukuvula zonke izithombe ngokuzenzakalela. Ukushintshela ohlelweni olulandiwe, mane ulandele izinyathelo ezingezansi:
1. Qhafaza kwesokudla isithombe, bese kumenyu evulayo, chofoza Vula nge;
2. Njengoba ubuka umbukiso ohlwini olukhonjisiwe, khetha Khetha olunye uhlelo lokusebenza;
3. Ngaphambi kokuchofoza isithonjana sohlelo, maka ibhokisi eliseduze Sebenzisa lokhu njalo uhlelo lokusebenza ukuvula amafayela .jpg (noma noma yisiphi isandiso sesithombe);
4. Manje, chofoza kuhlelo bese uqinisekisa ku Kulungile.
Uma ungalitholi igama lohlelo, pheqela phansi ohlwini bese uya ku- Ama-app angeziwe. Uma namanje ungayitholi, chofoza Sesha olunye uhlelo lokusebenza kule PC. Ebhokisini elivulayo, thayipha igama lohlelo kubha yokusesha.
Uma uyithola, chofoza kuyo bese inkinobho Vula. Bese uphinda izinyathelo ezingenhla, uhlelo lokusebenza luzofakwa phakathi kwezinketho zohlelo lokusebenza.
Izidlali zevidiyo ezinhle kakhulu ze-PC ne-Mac
Abahleli bombhalo abakhululekile nabangaxhunyiwe ku-inthanethi